Yeremia 40 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Nebusaradan gyaa Yeremia (1-6)
Wɔde Gedalia sii asaase no so panyin (7-12)
Wɔbɔɔ Gedalia ho pɔw (13-16)
40 Asɛm fi Yehowa hɔ baa Yeremia nkyɛn bere a awɛmfo so panyin Nebusaradan+ gyaa no wɔ Rama+ sɛ ɔmfa ne ho nni no. Bere a ɔkɔfaa Yeremia baa hɔ no, na wɔde abankaba agu no, na na ɔka Yerusalemfo ne Yudafo a na wɔatu wɔn ase de wɔn rekɔ Babilon no nyinaa ho. 2 Afei awɛmfo so panyin no de Yeremia gyinaa nkyɛn, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yehowa wo Nyankopɔn no na ɔkae sɛ mmusu bɛba ɔman yi so, 3 na Yehowa ama aba mu sɛnea ɔkae no, efisɛ moayɛ Yehowa bɔne, na moantie n’asɛm. Ɛno nti na asɛm yi ato mo no.+ 4 Ɛnnɛ, mereyi abankaba a egu wo nsa no. Sɛ wopɛ sɛ wo ne me kɔ Babilon a, ma yɛnkɔ, na mɛhwɛ wo. Na sɛ wompɛ sɛ wo ne me kɔ Babilon a, ɛnde san. Hwɛ! Asaase no nyinaa da w’anim. Baabiara a wopɛ sɛ wokɔ biara, kɔ.”+ 5 Bere a Yeremia da so gyina hɔ a onnya nsan n’akyi no, Nebusaradan kae sɛ: “San kɔ Safan+ ba Ahikam+ ba Gedalia+ a Babilon hene de no asi Yuda nkurow so no nkyɛn, na tena ne nkyɛn wɔ nkurɔfo no mu, anaa baabiara a wopɛ sɛ wokɔ biara, kɔ.” Na awɛmfo so panyin no maa no aduan ne akyɛde, na ɔma ɔkɔe. 6 Enti Yeremia kɔɔ Ahikam ba Gedalia nkyɛn wɔ Mispa,+ na ɔne no tenaa nkurɔfo a wogyaw wɔn wɔ asaase no so no mu. 7 Akyiri yi, asahene a wɔwɔ asaase no so nyinaa ne wɔn mmarima tee sɛ Babilon hene de Ahikam ba Gedalia asi asaase no so panyin, na wayɛ no panyin wɔ ahiafo a wɔwɔ asaase no so no so, mmarima ne mmea ne mmofra nkumaa a wɔamfa wɔn ankɔ Babilon no nyinaa.+ 8 Enti wɔbaa Gedalia nkyɛn wɔ Mispa.+ Wɔn a wɔbae ni: Netania ba Ismael,+ Karea mma Yohanan ne Yonatan,+ Tanhumet ba Seraia, Netofani Efai mma no, ne Maakatni no ba Yesania,+ wɔne wɔn mmarima. 9 Na Safan ba Ahikam ba Gedalia kaa ntam kyerɛɛ wɔne wɔn mmarima no sɛ: “Munnsuro sɛ mobɛsom Kaldeafo no. Montena asaase no so na monsom Babilon hene, na ebesi mo yiye.+ 10 Me de, mɛtena Mispa, na Kaldeafo a wɔbɛba yɛn nkyɛn no, mesi mo anan wɔ wɔn anim.* Na mo de, mommoaboa bobesa ne ahohuru bere mu nnuaba ne ngo ano, na momfa ngu nneɛma a mokora ade wom no mu, na montena nkurow a moafa no mu.”+ 11 Na Yudafo a na wɔwɔ Moab ne Ammon ne Edom nyinaa ne nsaase a aka no so no nyinaa tee sɛ Babilon hene agyaw nnipa bi sɛ wɔntena Yuda, na ɔde Safan ba Ahikam ba Gedalia asi wɔn so. 12 Enti Yudafo no nyinaa fii mmeae a wɔbɔɔ wɔn hwetee no nyinaa san baa Yuda asaase so, na wɔkɔɔ Gedalia nkyɛn wɔ Mispa. Na wɔboaboaa bobesa ne ahohuru bere mu nnuaba bebree ano. 13 Karea ba Yohanan ne asahene a wɔwɔ asaase no so nyinaa baa Gedalia nkyɛn wɔ Mispa. 14 Na wobisaa no sɛ: “Wunnim sɛ Ammonfo+ hene Baalis asoma Netania ba Ismael sɛ ommekum wo?”*+ Nanso Ahikam ba Gedalia annye wɔn anni. 15 Ɛnna Karea ba Yohanan ka kyerɛɛ Gedalia wɔ kokoam wɔ Mispa sɛ: “Mepɛ sɛ mekɔ na mikokum Netania ba Ismael, na obiara renhu. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ okum wo,* na adɛn nti na ɛsɛ sɛ Yudafo a wɔaboaboa wɔn ano aba wo nkyɛn no nyinaa hwete na Yudafo a aka no ase hyew?” 16 Nanso Ahikam ba Gedalia+ ka kyerɛɛ Karea ba Yohanan sɛ: “Nyɛ saa, efisɛ nea woreka afa Ismael ho no nyɛ nokware.”
^ Nt., “megyina wɔn anim ama mo.”
^ Anaa “ɔmmɛbɔ wo kra?”
^ Anaa “ɔbɔ wo kra.”